Mid ka mid ah xiriirada Isboortiga Soomaaliya oo qarka u saaran inuu burburo - Latest News Updates
Mid ka mid ah xiriirada Isboortiga Soomaaliya oo qarka u saaran inuu burburo
Mid ka mid ah xiriiradii ugu faca weynaa Isboortiga dalka Soomaaliya ayaa qarka u saaran inuu burbro, kaddib markii khilaaf xoogan soo kala dhex galay maamulka xiriirkaasi, kaasi oo sababay in howlihiisa uu hakad ku yimaado labadii sano ee ugu dambeysay.
Khilaafka soo kala dhex galay xiriirka Shataranjiga Soomaaliya oo soo jiitamayay in muddo ah ayaa ka dhashay kaddib markii xubno xiriirka ka tirsan ay warqad cabasho ah u direen ururka caalamiga ah ee Chess-ka oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano FIDE.
Qoraalka ayaa looga cabanayay Guddoomiyaha xiriirka Shataranjiga Soomaaliya Axmed Xasan Cabdi (Wataac) arrimo ku saabsan howlaha xiriirka Shataranjiga, waxaana lagu guul darreystay dadaallo la isugu soo dhoweynayay Guddoomiye Wataac iyo maamulka Xiriirka Shataranjiga.
Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya oo shir aan caadi ahayn ka yeeshay caqabado ku hor gudban 17-sano kaddib
Xiriirka Shataranjiga dalka Soomaaliya oo tan iyo markii la asaasay soo maray laba guddoomiye ayaa mudadii uu xilka hayay Axmed Xasan Cabdi (Wataac) waxa uu dalka dibadiisa uga qeyb galay tartamo heer caalami ah oo ku ciyaarta Chess-ka.
Dhinaca kale ilaa iyo iminka nooma suuragelin inaan helno Guddoomiye Wataac si aan arrintaan wax uga weydiino, hase yeeshee saraakiil ka tirsan bahda waxbarashada ayaa shabakadaan u xaqiijiyay inay tabeen taageeradii ay xiriirka ka heli jireen, sida agabka Chess-ka baridda ardayda ciyaarta Shataranjiga.